Umhla My Pet » umphezulu 6 Izizathu Kutheni kupheka ku Hot ziqingqe
umphezulu 6 Izizathu Kutheni kupheka ku Hot ziqingqe
ukubuyekezwa: Sep. 24 2020 | 2 min ukufunda
"Indlela intliziyo yomntu ngokusebenzisa esiswini sakhe."
Njengoko odie self-uvumo, Ndikwazi Ndibala izizathu ezininzi, kodwa apha phezulu 6 izizathu kuphekiwe "ashushu,"Ingakumbi ukuthandana nenkunzi scene yanamhlanje.
1. Ukupheka ibonelela "iresiphi" ogqibeleleyo romance.
Njengabafazi ezininzi, Ndiyakuthanda ukuba ezazisidla kwaye sidlweni zokutyela ezintle ngokuthi amasoka eyindoda njengenxalenye yenkqubo abathandanayo. kodwa, njengoko ubudlelwane be-, kukho into kakhulu "abasondeleyo" malunga isidlo ikhaya kuphekwe ekwabelwana bekwindawo yabucala emakhayeni omnye— kunye nekhandlela, umculo kancinane, esina kwaye ukukwazi ukuvumela iinwele zenu phantsi njengoko imeko bumisela. Wompu iCrème nabani?
2. Ukupheka ekhaya idla besempilweni ngakumbi kunabo yokutyela ukutya.
Xa kutya, amaxesha amaninzi ukutya oluthunyelwa, wakhonza kunye sauce abazizityebi nizingxale, okroqiweyo kukutyeba kwemfuneko, "Super ubungakanani" kwaye ngaphandle amalungiselelo eyiyo kwabo anemiqathango zokutya kunye nokwalisa ukutya. Yokutya ngaphandle kunokuba eninzi ngeendlela ngaphezu kwesinye.
3. izakhono zokupheka kongeza nawuphi na umfazi okanye resume komnye umntu.
Bacinge ukuba ukwandisa "Blue Book" ixabiso yakho kwimarike ndithandane.
Nantsi into kutshanje wabhala umbhali oyindoda: "Inani ngabafazi kule mihla ukuba ngokuphandle bayavuma abakwazi ukupheka kuyamangalisa. Xa umfazi uthi akakwazi ukupheka, ingcinga yokuqala olubangelwa eninzi iingqondo zabantu olungileyo "njani esihogweni ngaba umnyamekelayo wena ubuya kukwazi ukuthatha unonophelo kum ukuba?"
4. Ukupheka ikuvumela ukuba uzimele ngakumbi nangakumbi kuqatshelwe njengoko umfazi.
Akukho belindele umama wakho ukulungisa yenu yokudla oyithandayo, okanye wayethembe ukuba elumelwaneni yokutyela kuya kuba phezu menu ngoMvulo ngayo, okanye ucofa athabatha-ngaphandle; ungalungisa ngokwakho!
5. Ukupheka uhenda yonke imizwa.
Ukususela amavumba amnandi, ukuba amalungiselelo ekwipleyiti iliso-nomtsalane, ngendlela ezahlukeneyo imibala noburhabaxa, ukuya incasa wasezulwini— isidlo olungileyo kunokwanelisa abo ukunyamekela kumanqanaba amaninzi kangaka.
6. Ukupheka Blitz yindlela basondelelane.
Unako ukupheka kwaye unako ukwenza isaladi. Yondla omnye komnye, okanye mhlawumbi amabali isabelo nezithethe ezinxulumene iiresiphi nosapho. Ukupheka imenza umntu azive mhle kwaye iyamkholisa. Kwaye ukuba yinto ethile kuwe, na ukuba indlela Ndingathanda kuye ukuba azive?
Kwaye kukho iindaba ezimnandi apha: Awunayo ungena kwisikolo okupheka okanye ukuzithoba kwetyala ezingapheliyo imposiso; kukho ezininzi iziza zokupheka online ezinika step-by-step tutorials ukwandisa ukupheka I.Q.!
Enye qhinga olunoluncedo ukuthenga zokupheka ibhalwe abantwana. Zinikela sisiqalo ezinkulu zokufunda ukhuseleko ekhitshini, imilinganiselo umgangatho, kwaye kulula ukulandela iiresiphi.
khumbula, kuphekiwe yindlela kakhulu kuqwalaselwa "ashushu" yaye isibheno iphango umntu namhlanje!
10 Okokuqala ethungwayo Tips Umhla for Men
Yintoni esiyifundayo Marriage?